मृत घोषणा गरेको २५ वर्षपछि घर फर्किएका दाजुसहित परिवारकाे भाइले गरे हत्या
बाबुछोरीको शव गायब!
साउन २४, २०७५| प्रकाशित १५:५२
राजविराज– सप्तरीको राजविराज नगरपालिका–१५ मुसर्नीयाकी २४ वर्षीया वेचनीदेवी साहको गत जेठ ३१ गते राति शव फेला पर्‍यो। कुहिएको अवस्थामा उनको शौचालयको सेफ्टी ट्यांकीमा फेला परेपछि प्रहरीले थप अनुसन्धान अघि बढायो।
डेढ वर्षीया छोरीसहित वेचनीका पति सूर्यनारायण सम्पर्कविहीन भएपछि प्रहरीले हत्यामा उनकै संलग्नताको आशंका गरेर थप अनुसन्धान थाल्यो। तर प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भने प्रहरीले डरलाग्दो रहस्य फेला पारेको छ।
वेचनीको हत्यामा उनकै देवर ३६ वर्षीय मुर्जा भन्ने पञ्चदेव मुख्य योजनाकारका देखिए भने हत्यामा १० जनाको संलग्नता रहेको प्रहरीले दाबी गरेको छ। संलग्नमध्ये अधिकांश आफन्त र छिमेकी छन्, जसमध्ये ५ जना पक्राउ परिसकेका छन्।
घटना अनुसन्धानका क्रममा शंका गरिएका सूर्यनारायण फेला नपरेपछि साउन ७ गते वेचनीदेवीका देवर पञ्चदेव, पञ्चदेवकी पत्नी प्रमिलादेवी, सालो सत्यनारायण साह, छिमेकी २४ वर्षीय धर्मेन्द्र साह र ५० वर्षीय थापा भन्ने जिवछ साहलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो उनीहरुको बयानपछि भने आफूहरु नै आश्चर्यमा परेको सप्तरीका डिएसपी भावेश रिमाल बताउँछन्। ‘आफ्नै भाइले दाजुको वंशनाश गरेको यो घटना आफैमा आश्चर्यजनक छ,’ उनले भने।
पक्राउ परेकाहरुले सूर्यनारायणसहित उनकी गर्भवती पत्नी र छोरी प्रतिमाको आफूहरुले नै हत्या गरेको बयान दिएका छन्। उनीहरुका अनुसार बाबुछोरीको शव कोशी पश्चिमी नहरको च्यानलमा गाडिएको छ। तर प्रहरीले शव अझै फेला पार्न सकेको छैन।
प्रहरीका अनुसार पञ्चदेवको योजनामा नै पत्नी र छोरीसहित सूर्यनारायणको हत्या गर्ने निधो भयो। ‘योजना अनुसार जेठ २६ गते गाउँ नजिकैको बजार भरेर फर्कने क्रममा बाटोमा पर्ने बाँसघारीमा सूर्यनारायणलाई रक्सी ख्वाइयो,’ घटना अनुसन्धान गरिरहेका डिएसपी रिमाल भन्छन्, ‘उनी मातिसकेपछि छोरीसहित उनको समेत घाँटी थिचेर हत्या गरेको खुलेको छ।’
बाबुछोरीको हत्यापछि घरमा सुतिरहेकी वेचनीदेवीको पनि सोही दिन हत्या गरी शौचालयको सेफ्टी ट्यांकीमा फालिएको रिमालले बताए। ‘दुर्गन्ध आउन थालेपछि हामीलाई गाउँलेले जानकारी गराए,’ उनले थपे, ‘कुहिएको अवस्थामा पनि उनको सनाखत भयो र हामी घटनाको पर्दाफास गर्न लगभग सफल भएका छौं।’ केही आरोपीहरु फरार रहेकाले उनीहरुलाई पक्राउ गर्ने प्रयास भइरहेको उनी बताउँछन्।
किन भयो हत्या?
सम्पत्तिको लोभ र घरव्यवहारको रिसिबीका परिवारकै हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ। वर्षौंदेखि एकलौटी उपभोग गर्दै आएको सम्पत्ति एकाएक अंश लगाउनुपर्ने अवस्था भएपछि सूर्यनारायणको परिवार नै सिध्याएर सम्पूर्ण सम्पत्ति एकलौटी बनाउने लोभमा पञ्चदेवले हत्या योजना बनाएको प्रहरीको निष्कर्ष छ।
घटनाको केही दिनअघि पनि नागरिकता बनाउने विषयमा सूर्यनारायण र भाइ पञ्चदेवबीच विवाद भएको प्रहरीको भनाइ छ।
सूर्यनारायण र छोरी प्रतिभाको हत्या गरेको ठाउँ पत्ता लगाउन परिचालित प्रहरी टोली
गाउँलेहरुका अनुसार २०४७ सालमा मृत्यु भएका भनिएका सूर्यनारायण गत २०७२ असारमा घर फर्किएका थिए। उनी फर्किएपछि जिल्लाभरि नै खैलाबैला मच्चियो, तर आफ्नै भाइको मनमा चिसो पसेको कसैले सुइँकोसम्म पाउन सकेनन्।
घर आएपछि सूर्यनारायणले महदेवा–३ बस्ने मामा चलितर साहले आफूलाई बिक्री गरेको आरोप लगाउँदै कारबाहीका लागि प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। मामाले भारतको पञ्जाब राज्य अन्तर्गत जालन्धरमा रहेको फलाम उद्योगमा लगि आफूलाई ८० हजार (भारतीय रुपैयाँ) मा बेचेको उनको दाबी थियो।
सूर्यनारायणको मृत्युको कथा
२०४७ असोजको दोस्रो साता (दसैंको समयमा) चलितर दिदी सोमावती साह (सूर्यनारायणकी आमा) को घरमा पुग्छन्। आफू पञ्जावको राम्रो कम्पनीमा काम गरिरहेको बताउँदै भान्जालाई पनि उतै काममा लगाइदिने आश्वासन दिएपछि दिदी खुसी हुन्छिन्। घरको आर्थिक भार पनि कम हुने र छोराले उल्टै कमाइ पनि गर्ने आशामा तीन छोरामध्ये जेठो सूर्यनारायणलाई उनी भाइ चलितरको जिम्मा लगाउँछिन्। आफनो भाविष्यका बारेमा निर्णय लिन नसक्ने १० वर्षीय सूर्यनारायण मामाको साथ लागेर भारत पुग्छन्।
तर, त्यसको तीन महिनापछि गाउँ फर्किएका चलितर सुनाउँछन्– दुर्घटनामा परी भान्जाको मृत्यु भयो।
काम गर्ने क्रममा छतबाट लडेर भान्जाको निधन भएको खबरले सूर्यनारायणका आमाबुबा विक्षिप्त बन्छन्। छोराको मृत्यु भएको खबरले हृदायघातबाट ढलेका बाबु वेचन फेरि उठ्न सकेनन्, भोलिपल्टै उनको पनि निधन हुन्छ।
यता, पति र छोराको मृत्युले सोमावतीलाई बज्रपात पर्छ। तर, उनले धैर्य गर्दै विधिपूर्वक पति र छोराको काजकिरिया गर्छिन्। बिस्तारै चोटमा खाटा बस्दै जाँदा गाउँसमाजले पनि सूर्यनारायण र वेचनलाई बिर्संदै जान्छन्।
त्यो घट्नापछि चलितर पनि भारत फर्किएर गएनन्। गाउँघरमै खेतीपाती गरेर उनको दैनिकी चल्न थाल्यो।
तर, मरिसकेको भनिएका सूर्यनारायण गत २०७२ असार १७ गते टुप्लुक्क घर आइपुगे।
आमालाई देख्नेबित्तिकै सूर्यनारायणले सबै कुरा गाउँले समेतलाई सुनाए। चलितरले भने भान्जा मरिसकेको दाबी गर्दै उनलाई 'बहुरुपीया'को आरोप लगाएपछि कुटपिटको अवस्था पनि आको र सोही क्रममा चलितरलाई नियन्त्रणमा लिइएको डिएसपी रिमाल बताउँछन्।
जालन्धर सहरबाट करिब १० किलोमिटरको दुरीमा रहेको फलाम उद्योगमा मामाले छोडेर आएपछि आफूलाई बन्धक बनाएर काममा लगाइको सूर्यनारायणको भनाइ छ। 'उद्योगमा चिया पुर्याउने भारत समस्तीपुर निवासी एक व्यक्तिको सल्लाह र सहयोगमा भाग्न सफल भएँ,' उनले सुनाए।
गाउँ फर्किएपछि उनले अलि कम १३ वर्ष कम उमेरकी छिन्नमस्ता गाउँपालिका निवासी वेचनीदेवीसँग विवाह गरे।
हत्या गर्दा वेचनीको पेटमा चार महिनाको गर्भसमेत रहेको प्रहरीले जनाएको छ।